Fetsy 3 hahitana raha namboamboarina ny sary | Famoronana an-tserasera
Androany dia misy teknika tena mahomby hanodinkodinana sy hanovana sary, na izany aza, raha mandinika ny antontan-taratasy misy sary eo alohanay isika, dia afaka mamantatra mora foana raha toa ka namboarina na namboarina nomerika izany. Na dia maro aza ireo tondro ampiasaina amin'ny fandinihana ireo sary, androany dia mizara aminareo telo aho Tetika tsy mety diso hamantarana sary sandoka.
Soa ihany fa misy pitsopitsony sasany izay tsy azo resahina, na raha azon'izy ireo atao, dia mailo izy ireo amin'ny ankapobeny noho ny tsy fitandremana na ny tsy fahalalana. Ireto ny anton'izany jiro specular, jery todika ary fandalinana lamina.
1 Fanazavana: jiro mahazatra ho zava-dehibe
2 Jery ​​sy orientation fakantsary
3 Lamina sy miverina
Fanazavana: jiro mahazatra ho zava-dehibe
Ny jiro no antony lehibe indrindra milaza fa misy amin'ny tranga maro dia tsy azo atao tsotra izao ny manodinkodina azy ary amin'ny hafa dia tsy jeren'ny mpamorona izany. Betsaka ny faritra ahafahana manome taratra an'io hazavana io na taratra izay sarotra entina toy ny volo na maso miseho. Raha ny marina, ny fijery dia iray amin'ireo tondro mahatoky indrindra misy mba hanamarinana ny fahamarinana na tsia ny sary ary tena ilaina tokoa indrindra indrindra rehefa miatrika famoronana vondrona sy mora tohina isika. Miresaka jiro tsy ampoizina izahay, izay ireo hita taratra amin'ny masontsika, manome antsika fampahalalana marina momba ny toerana sy ny niavian'ny loharanom-pahazavana. Misy zavatra mazava azontsika tsoahina avy amin'ireto jiro ireto: Raha nifandray tamin'ny loharano hazavana ilay mpandray anjara mavitrika dia hanao izany ihany koa ny taratra ary ohatra raha nifindra niankavanana ny toetrantsika dia ny taratry ny masony no hanao azy ao amin'ny lalana mifanohitra, izany hoe amin'ny ankavia. Ity misy ohatra iray tena mazava (sary navoaka tao amin'ny magazine) izay amin'ny alàlan'ny famakafakana tsotra fotsiny ny mason'ireo toetrantsika dia azontsika atao tsara ny mamantatra fa sary môtika io ary azontsika atao koa ny manamafy izany amin'ny fahatokisana tanteraka.
Araka ny ahitanao ny fisaintsainana toa hafa mitodika amin'ny fanajana ny fakan-tsary. Mba hisian'ny firaisan-kinan-tsary, ny jiro specular rehetra dia tokony hiseho amin'ny faritra iray amin'ny maso tsirairay satria izy ireo dia amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny loharano hazavana. (Ho an'ny fahasamihafana eo amin'ny jiro manaitra ny tsirairay amin'izy ireo dia tokony hisy elanelana be eo amin'izy ireo). Amin'ity tranga ity, na dia ny mason'ny tarehin-tsoratra afovoany sy ilay hita eo amin'ny faritra havanana aza dia manana hazavana mitombina mitovy amin'ilay an'ny olona amin'ny faritra havia, dia tsy manambara kosa fa ity farany dia nampidirina am-panaovana artifisialy niaraka tamin'izy roa.
Ny fisaintsainana ireo zavatra sy olona dia manome fampahalalana marobe antsika ary miankina betsaka amin'ny orientation sy ny halavirana koa izany. Rehefa manana taratra miaraka amina fironana mitovy daholo ny zavatra sy ny tarehin-tsoratra rehetra, dia misy vintana lehibe kokoa tsy namerenana azy io, na izany aza rehefa tsy hajaina izany dia miatrika fanodinkodinana nomerika isika. Amin'ity ohatra faharoa ity dia ahitantsika fahasimbana haavo hazavana lehibe amin'ny tarehin-tsoratra tsirairay. Raha mandinika ny jiro amin'ny jiro isika dia ho hitantsika fa hita taratra eo am-baravarankely ary koa eo amin'ny sofa, kanefa tsy hita taratra amin'ny volon'ny ankizy izany (afa-tsy ilay eo afovoany). Tsy hitantsika eo am-baravarankely koa ny taratry ny mpanjaka ary hitantsika koa ny fomba nanjavonan'ny mistery ny tanan'i Juan, izay mitazona ny rahavaviny.
Jery ​​sy orientation fakantsary
Famantarana iray hafa tsara hahafantarana ny sary voaverina indray dia ny iris. Ity faritry ny maso ity dia miseho boribory rehefa eo afovoan'ny maso no misy azy, fa rehefa mivoaka izy dia manomboka miseho amin'ny ellipse. Rehefa mijery ny fakantsary ny maso ary tsy ao amin'ny foibe fitambarana, dia tsy maintsy asehony endrika miendrika ellipse, raha sendra tsy mitranga izany dia hiatrika sary namboarina isika.
Lamina sy miverina
Indraindray dia ampy ny mamakafaka amin'ny antsipiriany ireo singa rehetra mandrafitra ilay firafitra. Indrindra amin'ny sary misy hetsika marobe na misy olona na singa marobe, ny fanaovana klone dia matetika ampiasaina ho loharanom-pahalehibe. Ity teknika ity dia misy faritra voafitaka amin'ny sarintsika mba hamoronana fahatsapana ny hakitroky ary indrisy fa ampiasaina amin'ny tanjona politika hanodikodinana ny fahatsapana fa misy asa sasany. Ity misy ohatra iray: Tamin'ny fihetsiketsehana politika iray tany India natrehan'ny olona vitsivitsy, io teknika io dia nampiasaina mba "hivarotra" fahombiazana amin'ny hetsika amin'ny hevitry ny besinimaro ka hanome hery bebe kokoa an'ilay mpanao politika resahina. Ity, izay toa miharihary ankehitriny, dia matetika no tsy voamariky. Avy eo avelako ianao miaraka amin'ny ohatra izay nanamarihana loko maro ireo faritra klona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fetsy 3 hahitana raha namboamboarina ny sary
Sarimihetsika fohy mahatsiravina 10 izay hampifoha anao hatrany